डाक्टर गोविन्द केसीलाई जतिबेलापनि हृदयघात हुनसक्ने चिकित्सकहरुको भनाई ! « Bagmati Online
डाक्टर गोविन्द केसीलाई जतिबेलापनि हृदयघात हुनसक्ने चिकित्सकहरुको भनाई !
काठमाडौं, २३ असोज । १९ औं अनशनमा रहनुुभएको डाक्टर गोविन्द केसीको हृदयघात हुने सम्भावना उच्च रहेको डाक्टरहरुले बताएका छन् । अनशनका कारण मुटुको चाल अनियमित रहनुका साथै धड्कन असन्तुलित रहेको रहेकोले जतिबेला पनि हृदयघात हुनसक्ने उनको स्वास्थ्य हेर्ने डाक्टरहरुको निष्कर्ष छ ।
डाक्टर केसीले अनशन बसेको आज २६ औं दिन पुगिसकेको छ । पछिल्लो समय डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि स्वास्थ्य परीक्ष्ण गरिएको छ । केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभएका डाक्टर सुवासप्रसाद आचार्यद्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिनमा गोविन्द केसीको जतिबेला पनि हृदयघात हुनसक्ने बताइएको छ । डाक्टर आचार्यले केसीलाई कुनैनि बेला इच्छाविपरीत औषधि दिनुपर्ने अवस्था आउनेसमेत बताउनुभएको छ । साथै डाक्टर केसीलाई छाती दुख्ने, थकान हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, चक्कर लाग्ने र दायाँ छातीमा निमोनियाको लक्षण देखिएको बबताइएको छ । डाक्टर केसीको श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या आएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
डाक्टर गोविन्द केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि उचित उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने, २०७५ साउन १० गतेको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशासत्र अध्ययन संसथामा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउनुपर्ने जस्ता माग राख्दै जुम्लाबाट अनशन आरम्भ गर्नुभएको थियो ।